Zinedine Zidane iyo Paris Saint-Germain oo ku heshiiyay go’aan wadajir ah – Gool FM
Zinedine Zidane iyo Paris Saint-Germain oo ku heshiiyay go’aan wadajir ah
Dajiye November 25, 2021
(Paris) 25 Nof 2021. Kooxda Paris Saint-Germain ayaa heshiis la gashay tababaraha reer France ee Zinedine Zidane iyada oo la filayo inuu meesha ka baxdo tababaraha haatan ee kooxda Mauricio Pochettino.
Wargeyska “Le Parisien” ayaa soo wariyay in maamulka PSG ay wadahadalo la yeesheen Zidane dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, kaasoo ku saabsan inuu noqdo beddelka Mauricio Pochettino.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Zidane uu diiday dalab uga yimid Manchester United, uuna ku sii dhawaanayay kooxda Paris, iyadoo la eegayo hubanti la’aanta ku hareeraysan mustaqbalka tababaraha reer Argentina ee garoonka Parc des Princes.
Wargayska ayaa daaha ka qaaday in Paris Saint-Germain ay damacsan tahay in Zidane uu qabto shaqada bilowga xilli ciyaareedka cusub, maadaama wada xaajoodyada labada dhinac ay u socdaan dhankaas.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa sidoo kale sheegay in tababarihii hore ee Real Madrid uu qabo rajo weyn oo ku saabsan fikradda ah inuu qabto shaqada bartamaha xilli ciyaareedkan.
Le Parisien ayaa tilmaamtay in kooxda Paris ay diiday dalab uga yimid Manchester United oo ku saabsanaa Pochettino, laakiin go’aanka Mauricio ayaa laga yaabaa inuu gabi ahaanba bedelo qorshaha wada xaajoodka Zidane.
Manchester United oo heshiis la gaartay tababaraheeda cusub ee ku meel gaar ah
“Tani waa sababta uu Messi ugu dhow yahay inuu ku guuleysto Ballon d'Or” – Henry